नयाँ वर्ष २०७६ को अफर स्वरुप बडीगाड नदीमा जलयात्रा : टिकट बुकिंग आजै देखी खुला ! – ebaglung.com
नयाँ वर्ष २०७६ को अफर स्वरुप बडीगाड नदीमा जलयात्रा : टिकट बुकिंग आजै देखी खुला !
२०७५ चैत्र २२, शुक्रबार १२:१३	Top News, प्रमुख समाचार
अनिश शर्मा गैरे, गुल्मी २०७५ चैत २२ । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा बग्ने बडीगाड नदीमा नया बर्ष अफरको रुपमा जलयात्रा गरिने भएको छ ।
झक्कले एग्रो टुरिज्म रिसोर्ट प्रालिले बैशाख ३ गतेदेखी एक महिना सम्म बडीगाड नदीमा जलयात्राको मज्जा लिने अवसर जुटाएको हो । ३ गते नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले राफ्टिङ्ग गर्दै जलयात्राको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
खर्बाङ्ग देखी झेँदी, झेँदी देखी भुवाचिदी तथा भुवाचिदी देखी झक्कले सम्म तीन चरणमा राफ्टीङ्ग गरिने भएको हो । त्यसैगरी लामो समयसम्म जलयात्रा गर्न चाहनेहरुको लागि छुट्टै प्याकेजको पनि ब्यबस्था हुने बताइएको छ ।
सीट भने सीमित रहेको र आजै देखी सीट बुकिङ्ग गर्न आग्रह गरिएको रिसोर्टका अध्यक्ष चुरामणी सापकोटाले बताए । एकजनाको जलयात्राको लागि ८५० रुपैया टिकट शुल्क तोकिएको सापकोटामने भनाई छ भने त्रिशुली, सुनकोसी नदीमा २५ सय रुपैया जलयात्राको लिइने गरिएको छ । सो को तुलनामा हाल तोकिएको मुल्य निकै नै सस्तो भएको र सो अवसरको सदुपयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।
हाल ४५० जनालाइ मात्र जलयात्राको अवसर दिइने भएको छ । त्यसको लागि सिट बुकिङ्ग गर्न सबैमा रिसोर्ट प्रालिले आग्रह गरेको छ ।
सो अवसरमा ८ जनाको समुहमा आएमा १० प्रतिशत छुट तथा विद्यार्थीलाइ २० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।
यस अघि मुसिकोट नगरपालिकाले बडीगाड नदीमा गत पुस १२ गते राफ्टिङ्गको परीक्षण गरेको थियो ।
त्रिशुली नदीमा जलयात्रा गराइरहेको मानध्वज गुरुङ्ग सहितको ७ सदस्यीय बिज्ञ टोलीको उपस्थितीमा बडीगाड नदीमा जलयात्रा गरिएका थियो । सो समुहनै हाल जलयात्राको लागि आउने वडा ७ का अध्यक्ष प्रकाश काफ्लेले बताए ।
बडीगाड नदीमा जलयात्राको प्रशस्त सम्भावना देखिएको जलयात्राको टोलीले निष्कर्ष निकालेका थियो । नदीमा रहेका ठुला ढुँगाहरु मिलाउने र पानीको वहावलाइ केही ब्यबस्थित गर्न सकेको खण्डमा जलयात्राको माध्यमबाट प्रशस्त पर्यटक भित्राउन सकिने नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिए । बडीगाड नदी राफ्टीङ्गको माध्यमबाट पर्यटन प्रर्वद्धन गरी प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिने नदी हो । यस सम्पदाको सही सदुपयोग गरी स्थानीय सरकारको आम्दानी वृद्धि गर्ने तर्फ नेतृत्वको ध्यान गएको हो ।
ढोरपाटन नगरपालिकाव्दारा नवागत कर्मचारीहरुलाई स्वागत तथा सम्मान !
रिजन थापा र देवी घर्तीको सामाजिक गीती कथा ‘शंख’ सार्वजनिक